Xa kuphele ikhefu ngo-2015: yintoni kunye nendlela yokuthatha umntwana kwiholide
Xa kuphumla i-2015
Wonke umntwana wesikolo ukhangele phambili kwieholide ekwindla, kuba lo luphumlo lwakhe lokuqala olufanelekileyo lokufunda nezifundo emva kwehlobo. Ukongezelela koko, ngeli thuba unako ukuthathwa ngemisebenzi emininzi enomdla, kuba ingabanda ngaphandle, kodwa sele ihle kakhulu ekwindla.
Makhe sibone ukuba ukuwa kweeholide kuqale esikolweni ngo-2015, kwaye bangayenza njani inzala kunye nenzuzo.
Xa kuVulelwa kwiNgulo lokuNyaka 2015
Umbuzo wokuba iholide ekwindla ka-2015 iya kuqala ayikho inxaxheba kubafundi ngokwabo kuphela, kodwa kunomlinganiselo omkhulu kubazali babo, kuba ngaba oomama nootata baya kulungelelanisa abantwana babo. Njengomthetho, iiholide zasekwindla zihlala kwiintsuku ezi-7 ukuya kwi-10 kwaye ngeli xesha lokuphela kwe-Oktobha-ekuqaleni kuka-Oktobha.
Ngo-2015, ikhefu liwela ixesha ukususela ngo-Oktobha 31 ukuya kuNovemba 8, oko kukuthi, abantwana baya kuba neentsuku ezili-9 zokuphumla. Ubungakanani nemini yeeholide kunokutshintshwa kuphela ngolawulo lweziko elithile, kodwa ngenxa yesi sizathu, kufuneka sibe nezizathu ezintle, ezinjengobhubhane lwezifo ezidlulisiweyo.
Njengomthetho, ngexesha leeholide ekwindla ziyaqhubeka ukusebenza, kodwa zisebenza kwishedyuli yamahhala. Ngokukodwa, ezi ziinkalo ezikhethekileyo ezichaphazelekayo ezahlukahlukeneyo. Le nto ingaba yeso studio yecateral, kunye nesangqa sokudweba, ukubopha, ukubetha, ukudansa kunye njalo. Ukurekhoda umntwana kwiqela elithile, abazali kufuneka bazi ngokukhawuleza malunga neshedyuli yesikolo kunye nezicwangciso zeeholide. Ngamanye amaxesha ngenxa yobunzima bemisebenzi yabazali (ekwindla yimizuzu yokusebenza xa ixesha leeholide lide likude kakhulu), amaqela anjalo aphelile, kuba oomama noobawo abanakho ukushiya abantwana babo ekhaya.
Ukuba akukho zindawo, kwaye ufuna ukuba abantwana baye kwiiklasi ngexesha leeholide banele, ungabhala egameni labazali isicelo esibhekiswe entloko yesikolo kunye nesicelo sokwenza esinye isigaba kwi-hobby ekuthandayo. Enyanisweni, abantwana abaninzi bathanda ukuchitha iiholide zabo esikolweni-kuba bona sisiganeko esikhethekileyo, xa ungayiva umnxeba kwisifundo, kwaye uhamba kuphela eklasini apho uthanda ukuchitha ixesha kunye nokuzonwabisa okuthakazelisayo.
Ungasebenzisa njani ikhefu elisebenzayo le-autumn 2015?
Ootitshala banikezela ngamanye amacebiso malunga nendlela yokuhlelwa kweeholide ekwindla ngo-2015. Ezi ziziphakamiso ezintle kubantwana besikolo esiprayimari kunye nabantwana abaneminyaka eliphakathi kunye nabadala abaneminyaka eliphakathi.
Okokuqala, abantwana abaneengxaki kwisifundo esinye okanye esinye sinokubanjelwa ngolwazi ngoncedo lokufundisa. Okwesibini, unokuchitha ixesha elingaphezulu kwindawo evulekileyo yomsebenzi othakazelisayo okanye okhutheleyo, umzekelo, ukuhamba ngebhayisikili okanye ukugibela ihashe epakini, udwebe imihlaba emihle kufuphi nebhanki lomlambo njalo njalo. Okwesithathu, umntwana uya kujongela ukuya kwiiklasi ezithandekayo ekudaleni abantwana. Iyakwazi ukudweba, ukulandelelanisa udongwe, ukutshabalalisa amathoyizi, izifundo ze-decoupage okanye i-scrapbooking.
Njengoko uyakubona, ngexesha lokuba iiholide zesikolo ziyawa, unomdla kwaye unolwazi uchithe ixesha lakho lokukhulula nomntwana.
Iifilimu ezintle ze-2015. I-Top-7 ininzi ekulindelekileyo kwaye ixutyushwa ngamafilimu
Yintoni imimoya efana noSochi ngoJulayi 2016? Ukushisa okuqhelekileyo ku-Sochi, amanzi kunye nomoya, ngokubhekiselele kwiziganeko nokuhlaziywa
Ukubaluleka koqeqesho lwe-autogenic ngokusebenza komzimba ngokuqhelekileyo
Kuphi ukuya kwiholidi kunye nentsapho yonke?
IGrisi: ukuhamba, iiholide zolwandle
Isaladi nge-chalumi ethosiweyo
Indlela yokugcina ubuhle kwaye ufumane umfanekiso ogqwesileyo: 4 imithetho ephambili evela kuVera Brezhneva
U-Nastasya Samburskaya wathatha umtshato: isithombe somtshato wokuqala
Ukutolika kweeNkoma zeKhakamente elongwe
Ushizi owenziwe ekhaya
Indlela yokuphelisa uxinzelelo